Kubonakala ngathi uvavanyo lwe-glucose yegazi luyingozi | Ndisuka mac
Kubonakala ngathi uvavanyo lwe-glucose yegazi luyingozi
Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha elivela kwiApple libonisa ukuba inkqubo yokujonga eswekile yegazi ayisiyomarhe nje. Kubonakala ngathi bayasebenza ngenene kwaye nangona siqinisekile ukuba ayizukuba lula Bonke aba bantu bafuna ukukhangela inqanaba leswekile yabo yonke imihla banokufumana enye indlela elungileyo.
Inyaniso yeyokuba amalungelo awodwa omenzi wechiza awunakuba yindawo yokujika kwaye angaphantsi kwi-Apple kunelungelo lomenzi Apple Insider ingabutshintsha ubomi bethu ukuba iphunyezwe kwiwotshi efanelekileyo evela kwinkampani yeCupertino.
Ilungelo elilodwa lomenzi lithetha ngemitha engangenisi mthamo
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba yonke eminye imisebenzi ayinakuchaphazeleka koku kwaye ke ngumceli mngeni omkhulu kubo bonke iinjineli zeApple ukuyiphumeza. Kule meko, banxulunyaniswa nemitha ye-terahertz yombane. Ukuchaza nje ngokulula kuya kuba njalo uhlobo lombane oshukuma ngombane oya kuthi ubonakalise inqanaba leswekile egazini ngenxa yokufakwa kwezicubu.
Kuvakala ngathi kunzima kwaye kunjalo. Asinakho kwaye akufuneki sibe phantsi kwayo nayiphi na into engeyonyani malunga nelungelo elilodwa lomenzi wechiza kuba ikude kakhulu kodwa ukuba inokuphunyezwa kwi-Apple Watch ayizukunceda kuphela ukufumana amanqanaba eglucose, iya kuba nakho ukufumanisa ezinye iimeko zolusu.
Kubonakala ngathi I-Apple izimisele ngokuphumeza eli nqaku Kwaye nangona lilungelo elilodwa lomenzi wechiza, siyathemba ukuba le yenye yezo ogqibela ukuzibona ngendlela eyiyo kwisixhobo seApple. Ngaphandle kwamathandabuzo kuya kubakho ukubonwa kwangaphambili kwaye kuya kuthintela ukwenza i-puncture okanye ukumiliselwa kwe-subcutaneous sensor (enje sele isetyenzisiwe namhlanje) ukulinganisa eli xabiso libalulekileyo kubantu abanesifo seswekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Kubonakala ngathi uvavanyo lwe-glucose yegazi luyingozi
I-Apple ibambe amalungelo kumdlalo bhanyabhanya weDolly ophethe uFlorence Pugh
I-Apple Maps iyakongeza ulwazi kwiikhamera ezikhawulezayo, iingozi kunye nokuxinana kweemoto